Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ၂၀၀၀ခန့်သောစစ်ဘေးရှောင်မွန်ဂူဒေသခံများ ပြိုင်တူလိမ်ညာ
at 12/06/2016 11:33:00 AM
မွန်ဂူဒေသခံများ၏ နေအိမ်များအားလေတပ်ဗုံးကျဲ ကြည်းတပ်မီးရှို့ခြင်းကိစ္စနှင့်ပါက်သက်၍ ကာကယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်း အားမေးမြန်းရာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုသွားပါတယ်။
တပ်မတော်၏လေယဉ်ပျက်ကျမှုမရှိကြောင်းကိုမှု စစ်လော်ဘီများမှ ကာကွယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ထိုကြောင့် ယခုမြင်တွေရသော မွန်ဂူဒေသခံများသိမ်းဆည်းမိသည့် အပိုင်းအစများမှာ တပ်မတော်လေ၏လေယဉ်အပိုင်းအစများမဟုတ်ဘဲ မြောက်ပိုင်းတပ် FUA ၏ လေယဉ်အပိုင်းအစများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုငြင်းခုံနေကြပါတယ်။
The cries and trauma of native civilians of Northe...
I was Borm For the Motherland.
The Innocent civilians were seized by Myanmar Mili...
Massacre War Crime Committed by Myanmar Troop
5 children are seriously injured by 105 Motor Shel...
Urgent Appeal by Civil Society and Organisation Ka...
ဗမာ့တပ်မတော် ပြည်သူတွေရဲ့ အိုးအိမ်တွေကို အခုလိုကာက...
The U.S. Embassy is deeply concerned by the escala...
KDNG Advocacy Trip to Washington D.C
Gadai galaw nga ai kun? Gadai lit la nga ai kun? N...
Burmese Military's motor shelling and air-striking...
The Released Statement of Northern Alliance (Burma...
လကွေောငျးဖွငျ့ ဗုံကွဲ ဖကျြဆီးလိုကျသော မုံးကိုးမွို...
မုံးကိုးမွို့ ပွာပုံ ဘဝ ပွောငျးခံရတော့ မညျလော...?
Sinpraw de na ni Hpaji Jaw Magang Wa Sai
အပြုစိတ်မမွေးခင် အဖျက်စိတ်ကို အရင်ပြင်
1/12/2016 Sweet December Padang Shiga
Hugawng mungdu ဒူဝါဒိုင်ဖာဂမ် Jinghpaw Du Wa Daihp...
စင်ကာပူကို နှစ်(၂၀)အတွင်း ဒေါ်စု အမီလိုက်နိုင်မလား